I-RSS: Yenza ikhonkco lakho lokondla licace | Martech Zone
I-RSS: Yenza ikhonkco lakho lokondla licace
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 5, 2007 Lwesine, Okthobha 23, 2014 Douglas Karr
Ngokufika kwezikhangeli ezitsha, bendingakhathazeki kakhulu ngokubeka eyam uShishino ikhonkco ngaphakathi komxholo wendawo yam. Ndiqala ukuyicinga kwakhona loo nto.
Ukuba ubungazi okwangoku, ezi bhrawuza zintsha zinokubhaqa ngokuzenzekelayo ifayile ye- uShishino feed okoko nje ichongiwe ngaphakathi kwephepha lephepha. Ukucofa kwi uShishino Iziphumo zesimboli 'ekubhaliseni kolo kondla' ngebrawuza yakho. Ke xa ukhetha ukondla kwisikhangeli sakho, uya kudibana noluhlu lwamabali asebenzayo afumanekayo ngokutya.
Ngaphakathi kwintloko yendawo yam, ndinekhowudi elandelayo:
Isikhangeli ngokuzenzekelayo siyayibona le khowudi kwaye sinike isalathiso sokuba ukutya kungabhaliswa:
Ngaphambi kokukhutshwa kwe-Intanethi Explorer 7, uMicrosoft wadibana nabanye abaphuhlisi besikhangeli kwaye bagqiba kwelokuba uphawu lwehlabathi uShishino iza Kubayi
Kwiinyanga ezi-6 ezidlulileyo, bendithembele ngaphakathi uShishino Isalathiso sabantu ukuba babhalisele ukutya kwam. Nangona kunjalo, kutshanje ndenze uvavanyo apho ndibeka khona uShishino ikhonkco onyaweni kuwo onke amaphepha am. Qikelela ukuba? Kwiintsuku ezimbalwa ukubhaliselwa kwam kokutya kuye kwehla malunga ne-20%! (Ndisebenzise Isongezelelo ukulandelela).
Ndiyaqonda ukuba ayisiyonzululwazi kakhulu, kodwa ndingacebisa ukuba abafundi banazo uShishino ikhonkco lokondla lichongwe ngokucacileyo kwaye liyafumaneka kubafundi bakho abasebenzisa ezinye izixhobo ezingafumaneki ngokuzenzekelayo ikhonkco ngekhowudi yakho yokubhaliweyo.
tags: isiceloifidiIthegi yentloko yokondlaikhonkco lokondlaukutyarel enyerss feedI-tag yesihloko se-rssI-rss xmlXML
I-WordPress: Gcina kwaye ubuyisele kwenye iServer
NgoJanuwari 5, 2007 ngo-7:19 PM
Esinye isizathu sokwenza oko: ngamanye amaxesha abafundi bafuna ukuqhagamshela kumrhumo wakho. Xa ndifunda umntu endifuna ukumrhuma, ndiya kuhlala ndibabandakanya kumakhonkco am osuku kunye nenqaku (elibhalisiweyo) eliqhagamshelwe kwisondlo sabo. KwiFirefox 2 ndinokutya okulungiselelwe ukuya ngqo kwiFeedDemon, ke ukuba awunalo ikhonkco kwiphepha endinokucofa ekunene kwaye ndikope ikhonkco, ke kufuneka ndijonge uMthombo ukuze ndiwufumane.
NgoJanuwari 5, 2007 ngo-8:08 PM
Yiloo ndlela endibhalise ngayo kwibhlog yakho nge-icon ye-RSS ezantsi. Andizange ndihoye ukuba zeziphi izikhombisi kwibar yedilesi yesikhangeli mhlawumbi kodwa xa usebenzisa isikhangeli; leyo ayiqhelekanga kakhulu, ndihlala ndijonge i-Icon.
enye into ekufuneka uyikhumbule ayinguye wonke umntu oza kwibhlog yakho ngebhrawuza. Abanye baya kuza ngeekhonkco kubathengi babo be-RSS abangabakhangeli kwaye kunqabile ukuba abakhangeli be-buildin bomthengi babone ngale ndlela ...
NgoJanuwari 5, 2007 ngo-8:12 PM
Yayiyikhonkco ye-icon ye-RSS endandidla ngokubhalisa ngayo - njengoko ndingazange ndihoye ibar yedilesi kule nto kwaye andifane ndibhalise nge-browser.
Ndihlala kumfundi wam we-RSS kwaye ngenxa yoko onke amakhonkco am afunyenwe kwaye afakwe ngaloo ndlela kwaye bambalwa kakhulu abame bodwa umxhasi we-RSS onalo hlobo lwenqaku.
Jan 6, 2007 kwi-12: 38 AM
Doug, ndikunye nawe ngokupheleleyo kule nto! Ndenze nje isithuba kwiqhosha lam elitsha leRSS lothando 🙂
Inqaku elihle Sterling, ndenza okufanayo ngamanye amaxesha.
NgoJanuwari 6, 2007 ngo-7:59 PM
Ingcebiso elungileyo, ndiyifumene kuzo zombini ngoku.
Jan 9, 2007 kwi-3: 53 AM
Enkosi kwesi sithuba. Ndandixoxa ngesi sihloko kunye nenye i-blogger kwinyanga edlulileyo kwaye ndandihlala ndizibuza ukuba yeyiphi indawo engcono yokubeka iqhosha lokubhalisa. Okwangoku kwindawo yam ndinomfanekiso we-RSS kuphela kwibha yedilesi yesikhangeli kunye nezantsi, kodwa ndicinga ukuba enye esecaleni okanye engasentla ingaluncedo, ngokusekwe kwizimvo endizifundileyo apha.
NgoJanuwari 11, 2007 ngo-10:48 PM
Bendinayo eyam phezulu, kodwa ngoku ndiyazibuza ukuba kutheni ndingazange ndiyibeke ezantsi ngaphambili.